Izindatshana zikaMuhammad Yasin Martech Zone |
Imibhalo nge UMuhammad Yasin
Wagcina nini ukukubuza ukuthi ungubani? Mhlawumbe lapho uqala ukubhalisela i-akhawunti yakho ye-Amazon, akunjalo? Kwakudala kangakanani lokho? Yilokho engikucabangile! Lapho nje ungena ngemvume ku-akhawunti yakho ye-Amazon (noma mane uvakashele isayithi labo uma ungene ngemvume), ikubingelela ngokushesha ekhoneni elingakwesokudla. Ama-Amazon awakukhonzeli nje kuphela, kepha akhombisa ngokushesha izinto ezifanele: iziphakamiso zomkhiqizo ngokususelwa ku-
Kokubili abathengisi bedijithali nezitolo zezitini nodaka bahlala bezingela izindlela ezintsha nezintsha zokubamba imikhondo eminingi futhi bayiguqulele kumakhasimende akhokhelayo. Ukusho ukuthi lokhu kuyinselelo enkulu kungaba yinto eshaqisayo, njengoba ukufika kwe-intanethi sekwenze umncintiswano waba lukhuni kuyo yonke imboni ongayicabanga. Kuyo yonke le minyaka, abathengisi bazobeka amafomu "Xhumana Nathi" kuwebhusayithi yabo ngethemba lokuthi iziphequluli ezinentshisekelo zizoxhumana nazo
Akungabazeki ukuthi ukumaketha kwedijithali kuyisilo esinamandla - nesilo esisodwa se-helluva lapho. Njengoba sonke singathanda ukucabanga ukuthi ukumaketha kwedijithali ngokufanayo kuyafana noma ngabe yini, akunjalo neze - futhi izizathu zisobala. Njengebhizinisi, ungakhetha ukunikela ngamaphesenti athile wesikhathi sakho nesabelomali ezinhlotsheni ezahlukahlukene zokumaketha kwedijithali: imithombo yezokuxhumana, i-PPC, ukubuyisela emuva, ukumaketha kwevidiyo, i-imeyili